Shiinaha warshad weyn oo Cast Cast Iron Gate Madax iyo soosaarayaasha | Nortech
Biyaha ayaa taxanayaal ah
Baaxad weyn Tuur Birta Madax
Fallaaraha albaabka birta lagu tuuro oo weyn
Rakibid toosan iyo fidsan
Jirka ku jira birta birta ah, birta birta ah, naxaasta, naxaasta iyo giraanta birta ee birta ah ee birta ah
daaweynta biyaha, warshad sonkor ah, biyo la cabi karo
OS&Y Rising stem DN700-DN1200
Jir aan kacaynin DN700-DN1800
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Bir Fadhiga Cast Iron Gate Madax Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
Waa maxay cabirka weyn tuubada birta ee birta?
Baaxad weyn Tuur Birta Madax waxaa si ballaaran loo isticmaalaa khadka ugu muhiimsan ee biyo-soo-saarka, warshadaha biyaha, biyo-gelinta iyo bullaacadaha, daaweynta biyaha qashinka, nidaamka biyo-gelinta magaalooyinka.
Bir ku fadhida naxaas, naxaas, iyo siddooyin wax lagu xidho oo bir ah.
Labada xidid ee aan kacsanayn iyo Rising stem labadaba waa la heli karaa.
Alaab-qeybiyaha guud ee mashaariicda biyo-biyoodka Shiinaha.
wax soo saarka loo habeeyay iyadoo loo eegayo xaaladaha shaqada.
Kordhinta fidinta ayaa la heli karaa markii la codsado.
Noocyo kala duwan oo hawlgal ah ayaa la heli karaa markii la codsado.
Astaamaha ugu muhiimsan ee cabbirka weyn ee NORTECH Cast Iron Gate Valve?
NORTECH Cabbir Ballaaran Cast Iron Gate Valve Bixiyaan adeegga ugu dambeeya ee lagu kalsoonaan karo meel kasta oo cadaadiska ugu yar uu muhiim yahay.
1) Wareeg gudaha ah iyo jirid aan kacayn, oo kusugan isku meel haduu waabku furanyahay ama xidhan yahay. waxaa loo isticmaali karaa dhulka hoostiisa, ama marka boosku xadidan yahay. cabbirka ilaa DN1600.
2) Wareejinta banaanka iyo York (OS&Y), kor u kaca jirridaha wiishka markuu furmo iyo hoos udhaco marka waalka xirmayo si loo bixiyo calaamado muuqaal ah oo socodka socodka ama daarmayo. Jirridda ayaa laga go'doomiyey geedi socodka warbaahinta muddo dheer oo adeeg ah marka loo eego filtarka leh stem aan xasilloonayn.
Heerka EN1171, BS5163, DIN3352,
1) flange PN6 / PN10 / PN16, miiska BS10 D / E / F, RF iyo FF
2) Ewaalka ach hydrostatically tijaabiyo BS EN 12266-1: 2003 / BS6755 / ISO5208
1) Flange ASME B16.47, AWWA
2) waalka kasta waxaa hydrostatically tijaabiyo in API598 / ISO5208
Takhasus u leh bareesada albaabka birta weyn.
1) Giraanta kursiga giraanta iyo giraanta ku wareegsan waxaa loogu talagalay carrab iyo jeexdin, iyadoo aan la alxamayn.
2) kanaalka hagida ah waxaa loogu talagalay rakibaadda jiifka ah (marka la codsado)
Jidhka waalka weyn ee waalka
Wareeg ka mid ah waalka weyn ee waalka
Qaabdhismeedka waalka weyn ee waalka ee rakibidda jiifka ah
Faahfaahinta farsamada ee NORTECH Cabbirka weyn ee Tuurista Birta Birta?
Naqshadeynta iyo Soo-saarista DIN3352 F4 / F5, EN1074-2 / ​​BS5163 / MSS-SP70 / AWWA C500
Waji ka waji DIN3202 / EN558-1 / BS5163 / ANSI B16.10
Qiimeynta cadaadiska PN6-10-16, Fasalka125-150
Dhamaadka Flange EN1092-2 PN6-10-16, BS10 Talbe DEF, ASME B16.47 / AWWA
Cabbirka (kor u kaca) DN700-DN1200
Cabir (Jir aan kacayn) DN700-DN1800
Jidh, duuf iyo guntin Birta ductile GGG40 / GGG50 / A536-60-40-12 / 60-40-18
Giraanta fadhiga / giraan wareeg ah Naxaas / Naxaas / 2Cr13 / SS304 / SS316
Howlgalka Handwheel, Gooryaanka Gear, actuator koronto
Codsiga Daaweynta biyaha, bulaacadaha, biyaha magaalada, iwm
Codsiga NORTECH cabirka weyn ee waabarada birta lagu dhejiyo
Baaxad weyn Tuur Birta Madax waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa khadka ugu muhiimsan ee biyaha magaalada, daaweynta bullaacadaha, warshadaha dhismaha, khadka tuubada batroolka, warshadaha kiimikada, warshadaha cuntada, warshadda Sonkorta, warshadaha dawooyinka, dharka-warshadaha, waaxda korantada, dhismaha maraakiibta, warshadaha qodista, nidaamka tamarta iyo tuubooyinka kale ee dareeraha ah. qalabka xakamaynta ama jarista.
Hore: Tayada Sare Triple ka miisaamaan waalka balanbaalis BW Shiinaha saaraha / qeybiyaha / warshad
Xiga: Warshadaha Madax Flange adag Khatimidii Ductile Iron Gate Madax oo dhan Sale Shiinaha warshad qeybiye
BS5163 waalka albaabka
waalka iridda birta ah
DIN3352 waalka waalka
Qalab adag oo adag oo bir ah
waalka albaabka weyn
Waalka iridda Buugga bir bir ah
Birta fadhida waalka albaabka
Waalka Khadka Biyaha
Bir Fadhiga Cast Iron Gate Madax
Waalka albaabka adkeysi leh